Hawsha aqbalka & shuruudaha ee Ukraine - Waxbarashada Bro
Hawsha aqbalka & shuruudaha ee Ukraine
shuruudaha gelitaanka ee Ukraine
shuruudaha Admission in Ukraine waa mid aad u fudud, sida Hawsha aqbalka ah mid aad u.
Saxnaanta ku-Passport waa in aanay noqon wax ka yar, waayo, 1 year.
Waa inaad Documents getEducational (heerka O / SSCE / HSSC, Bachelor ama Master Degree haddii la heli karo)
UPD: Since 2016 Hawsha aqbalka in jaamacadaha Ukraine ee ardayda shisheeye aviable via Xarunta Admission Yukreeniyaan. ururka Ukraine rasmiga ah ee ardayda ajnabiga ah.
Jaamacadaha Ukrain bilaabaan in ay soo saaraan "Martiqaad Letter" ka March / April sannad walba.
Jaamacadaha aqbalo Codsiyada Study bisha Janaayo ka qaadashada September. Admission iyo fiisada qaadan sahlanaan doonto la "Waraaqaha Martiqaad" ardayda dalban inaga dhex hore oo soo saari ay "Waraaqaha Martiqaad" ka / Jaamacadaha talinayaa doortay siday u kala horreeyaan. Jaamacadaha ayaa sii bixinaysaa "Waraaqaha Martiqaad" waraaqaha ka March / April si November (inta badan kordhiyay in December). Ka dib markii March / April, waxa ay qaadataa oo ku saabsan 3 maalmood oo shaqo si ay u soo saari ah "Martiqaad si Baro" warqad ka la doortay / talinayaa University.
Fasallada ayaa u bilaabi ka 1da September. ardayda Dibadda waxaa loo ogol yahay in ay ku biiraan barnaamijyada ay Ingiriisi Dhexdhexaad ilaa 15 th of November. Ardayda yimid ka dib 15 th ee November ku biiri kartaa Barnaamijka diyaarinta kaliya.
ardayda waa in ay had iyo jeer siiyaan ay cinwaanka boostada ansax & lambarada xiriirka foomka Codsiga jaamacadaha.
Marka Qaadashada warqad Martiqaad
Ardaygu waa inay la xiriiraan safaaradda Ukraine in uu / iyada dalka si ay u dalbato fiisaha ardayga. Safaaradda Ukraine ka bilowdey aqbalayaan Codsiyada Visa Ardayga iyo arrinta Visa Student ka May / June oo xajiya ilaa bixinta 15 th November. Wadamada qaarkood safaaradda Ukraine bilaabataa Codsiyada Visa Ardayga iyo arrinta Visa Ardayga by shaqeeya 15 th August si ay u 15 th November (sida caadiga ah waxaa loo kordhiyay in ay December / January). Dukumentiyada soo socda waa in la soo gudbiyaa ee Ukraine safaaradda si ay u helaan Visa Ardayga a,
Waraaqaha loo baahan yahay on Arrival:
Garoomada International talinayo in Ukraine : Kyiv (garoonka Boryspol), Dnepropetrovsk, Odessa iyo Kharkiv.
Ardaygu waa in uu hubo ee aan keeno oo dhan Lacagaha iyo Documents hoos Authority Immigration Ukraine haddii kale xusay isaga / iyada Entry diidi kartaa oo dib ugu noqdo iyada dalka / masaafurin Ardaygu waa inay keenaan lacag Tuition buuxa, lacagta hoyga iyo kharashyada kale (Cash ama Travel Jeeggaga). Waxaas oo dhan waxay Baro ka hor in aad jaamacad. Ardayga waxaa su'aalo garoonka Maamulka Socdaalka ku saabsan kharashka waxbarashada iyo kharashyada kale. Ardaygu waa inay keenaan qaar ka mid ah lacag dheeraad ah shakhsi sii. Waxaad baran kartaa talo ku saabsan kharashka ku nool Ukraine.
Internationall Passport / safarka dokumentiga la Ukraine Visa waxa on (ansax -not ka yar hal sano)
Letter Martiqaad Original ee Jaamacadda
Shahaadada dhalashada , Turjumay luqada Yukreeniyaan iyo sharciyayn Nootaayaha Guud ama Ukraine Safaarada. (Ardaygu wuxuu ku xiran yahay in ay keenaan waraaqaha loo tarjumay in Ukraine haddii Ukraine Safaarada baahan yahay tarjumaadaha waqtiga bixinta Visa)
Certificates School Original ( heerka O / SSCE / HSSC, Bachelor ama Master Degree haddii la heli karo ) turjumay luqada Yukreeniyaan iyo sharciyayn Nootaayaha Guud ama Ukraine Safaarada (Ardaygu wuxuu ku xiran yahay in ay keenaan waraaqaha loo tarjumay in Ukraine haddii Ukraine Safaarada baahan yahay tarjumaadaha waqtiga bixinta Visa)
General Health- Certificate Medical soo saaray ugu yaraan laba bilood ka hor laga galo in si Ukraine turjumay luqada Yukreeniyaan iyo sharciyayn Nootaayaha Guud ama safaaradda Ukraine. (Ardaygu wuxuu ku xiran yahay in ay keenaan waraaqaha loo tarjumay in Ukraine haddii Ukraine Safaarada baahan yahay tarjumaadaha waqtiga bixinta Visa)
HIV- AIDS Certificate xun soo saaray ugu yaraan laba bilood ka hor soo galo turjumay Language Ukraine iyo sharciyayn Safaarada Public ama Ukraine Nootaayaha. (Ardaygu wuxuu ku xiran yahay in ay keenaan waraaqaha loo tarjumay in Ukraine haddii Ukraine Safaarada baahan yahay tarjumaadaha waqtiga bixinta Visa)
Caymiska Caafimaadka daboolaya hal sano / dalalka qaar ka mid ah oo kaliya safarka muddo
Wakiilashada Letter ka Waalidiinta / Qofka ah oo la socday inuu qaado kharashka ardayga inta / barashada Ukraine . (Ma aha xaalad ah ee dhammaan Jinsiyadaha)
Bayaanka Bank si ay u caddeeyaan awoodda dhaqaale. (Ma aha xaalad ah ee dhammaan Jinsiyadaha)
12 sawiro size Passport (3 * 4 cm )
Air Ticket ansax ah muddo hal sano ah, waa in ay noqdaan iyo dib u fiirinayaan
kaarka socdaalka waa in la buuxiyaa by arday ku yimid in Ukraine oo la dhigaa badbaadiyey inta lagu jiro joogitaankaaga Ukraine.
Ardayga waa in uu soo saaro in Maamulka Socdaalka marka soo laabtay guriga ama u safrin dalka ka maqan.
Taxanaha meelaynta ee Ukraine
Warqad Martiqaad example.There yar yihiin versions of warqad.
Si aad u hesho ogolaanshaha ee Jaamacadda wax ka mid ah Ukraine waxaa jira saddex tallaabo:
STEP 1: SIDA LOO HELO WARQAD martiqaad
Si ka University mid ka mid ah Ukraine waa inaad la xiriirtaa wakiilada jaamacad ama wakiilada waxbarasho hesho warqad martiqaad. Waxaad xiriirada awood noo oo aan aad ku talin doonaa wakiilka wanaagsan jaamacadaha Ukraine.
Ka dib markii warqad martiqaad ka jaamacad ama wakiilada ay qaadan ardayda waa inay la xiriiraan si ay kuugu dhow Ukraine Safaaradda ama Qunsuliyadda.
Ardayga waa in lagu dabaqaa safaaradda Ukraine la dokumentiyada soo socda:
Warqad Martiqaad Original
baasaboor caalami ah Original (sax ah muddo hal sano ah)
Shahaadada Sare Dugsiga Sare (turjumay luqada Yukreeniyaan)
Shahaadada dhalashada (turjumay luqada Yukreeniyaan)
Certificate Medical maqan muujinaya ee Aids / HIV (turjumay luqada Yukreeniyaan) • Shahaadada Medical muujinaya taam jirka iyo maskaxda (turjumay luqada Yukreeniyaan)
8 size Passport Photos
Ka dib markii fiisaha ka safaaradda Ukraine ama Qunsuliyadda helitaanka, ardayda waa in ay wargeliyaan wakiilada ay ku saabsan / faahfaahinta iyada diyaarad uu la yimid taariikhda iyo waqtiga.
habka Admission noqon kartaa iyada oo aan wakiilada. laakiin “EducationBro” Magazine si adag ugu talinaynaa in la sameeyo gelitaanka la wakiilada waxay ka caawisaa.
Waxbarashada Ukraine waa ka ugu jaban Yurub iyo adeegyada wakiilka waa raqiis ah oo aad u. Xaqiiqdu waxay tahay in la isticmaalayo adeegyada wakiilka ah, aad naftaada dammaanad fiiso iyo gelitaanka jaamacadda. Wakiilada ogaan dhan Gudigga iyo lagaaga caawiyo in aad si looga fogaado in wax dhibaato ah. Haddii aad naftaada u samayn doonaan,, ka dibna waxaa jira itimaalka sare oo aad ka dhigi doonaa qalad iyo lumiyaan waqti iyo lacag.
Waa talo kaliya. Waa doorashadaada. Waxaad nala soo xiriiri kartaa haddii aadan go'aan gaari karin ama shaki daacadnimada wakiilada aad. la-talinta waa lacag la'aan. Waxaan nahay urur samafalka iyo kuwo had iyo jeer diyaar u yihiin inay caawiyaan ardayda ajinebiga ah.
Waxay noqon karaan faa'iido kuu
nidaamka waxbarashada ee Ukraine
Maxaad waxbarasho ee Ukraine?
TOP 7 jaamacadaha farsamo ee Ukraine 2016